Kismaayo lagu xiray Taliye Dowladda u magacday Jubbooyinka – Radio Daljir
Agoosto 14, 2018 8:34 g 0
Laamaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa galabta garoonka ka celiyey Taliyaha NISA iyo ku-xigeenkiisa oo dowladda Somaliya ay u magacawday degaanada Jubbaland.
Labadan sarkaal ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cali Mire Ducaale oo ah Taliyaha NISA iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim , waxaana caawa saraakiishan ay ku hooyanayaan xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo.
Hay’adda NISA ee Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay inay gacant ku heyso Labadan sarkaal, islamarkaana maalinta berri ah ay ku soo celin doonaan magaalada Muqdisho oo maanta ay ka tageen.
“Hay’adda Nabad suggida iyo sirdoonka Jubbaland oo ah Hay’ad taliska dhismeheeda iyo kan ciidanba dhameystiran yahay ayaa gacan bir ah ku dhigtey amniga gudaha dowlad goboleedka Jubbaland taas oo keentey xasiloonida iyo amniga ka jira Jubbaland ee ay bulshada reer Jubbaland ku wada naaloonayaan”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Jubbaland.
Ilaa hadda dowladda federaalka kama aanay hadlin xariga Jubbaland ay kula kacday saraakiishan ka tirsan NISA, balse waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo tabashada Jubbaland.